प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजै डिस्चार्ज गरिने | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजै डिस्चार्ज गरिने
१४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजै डिस्चार्ज गरिने ग्राण्डी अस्पतालले बताएको छ । ओली बुधबार अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
उनको दुई पटक डायलासिस गरिएको छ । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर चक्रराज पाण्डे र नोफ्रोलोजी विभागका अध्यक्ष डा. दिव्यासिंह शाहले प्रेस नोट जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अवस्था सामान्य रहेको बताएका हुन् । साथै आजै डिस्चार्ज गर्ने तयारी छ ।
फेरि डायलासिस गर्नुपर्ने नपर्नेबारे रगतको रिपोर्ट आएपछि चिकित्कसहरुले निर्णय गर्ने मेडिकल डाइरेक्टर पाण्डेले बताए ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार अहिले फेरि मिर्गौलामा समस्या देखिएको छ । सिंगापुरबाट फर्किइसकेपछि पनि केही समय पहिले ग्राण्डीमा नै चेकजाँच गराउँदा मिर्गौलाले राम्रोसँग काम नगरेको पाइएपछि क्याथेटर राखिएको थियो । तर, अहिले फेरि समस्या आयो ।
चिकित्सकहरुका अनुसार मिर्गौलाले काम नगरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको फोक्सोमा समेत पानी जम्मा भइसकेको रहेछ । त्यही कारण बुधबार आकस्मिक रुपमा डायलासिस गर्ने निर्णय चिकित्सकहरुले लिए ।
तर, बुधबार प्रधानमन्त्रीको रक्तचाप निकै कम भएका कारण दुई घन्टा मात्र डायलासिस भयो । डायलासिसपछि प्रधानमन्त्रीले निकै दुखाई महसुस गरेका थिए । उपचारका क्रममा उनलाई पटक–पटक अक्सिजन दिन परेको थियो ।
बिहीबार झण्डै चार घन्टा डायलासिस भयो । दुई चरणको डायलासिसका प्रधानमन्त्री निकै थकित देखिए पनि केही घण्टा आराम गरेर प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्कने चिकित्सकहरुले नेकपा नेताहरुलाई जानकारी दिएका छन् । एक चिकित्सकका अनुसार विहीबार पनि अस्पतालमै आराम गर्दा राम्रो हुने भएता पनि प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज भएर आफूलाई सामान्य रहेको देखाउन चाहन्छन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार जब मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गर्दैन, त्यस्तो बेला फोक्सो लगायत शरीरका अन्य भागमा पानी जम्मा हुन्छ । र, त्यही पानी निकाल्नका लागि पनि डायलासिस गर्ने गरिन्छ । यससँगै औषधि दिएर मिर्गौलालाई पूर्ण रुपमा सक्रिय बनाउने प्रयास पनि हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार र विहीबार दुईपटक डायलासिस गरेर औषधि दिइएको छ, ताकि उनको मिर्गौलाले फेरि पहिले जस्तै काम गरोस् । चिकित्सकहरुले डिस्र्चाज गरेर घर पठाउनुको अर्थ पनि अबको केही दिन उनको अस्वथा हेर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
तर, केही दिन पर्खेर हेर्ने निर्णय कत्तिको चुनौतीपूर्ण होला ? यो चिकित्सकहरुले नै जान्ने कुरा हो ।
सम्भावित दुई विकल्प
चिकित्सकहरुका अनुसार एक चरण डायलासिस गरेर औषधि दिँदा मिर्गौलाले फेरि पहिलेकै जस्तो काम गर्न सक्छ । त्यसो भएमा थप उपचार गर्नु पर्दैन । तर, डायलासिस गरेर औाषधि दिँदा पनि मिर्गौलाले काम गरेन भनेचाहिँ दुई वटा मात्र विकल्प हुन्छ । एउटा– लगातार डायलासिस । दोस्रो– मिर्गौला प्रत्यारोपण ।
चिकित्सकहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैलाले अब पनि पहिलेको जस्तै काम गरेन भने हप्तामा दुईपटक डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विकल्पबारे प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले छलफल गरेका छन् । तर, निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । किनकि, हप्तामा दुईपटक डायलासिस गरिरहन निकै कष्टपूर्ण हुन्छ । र औषधि खाँदा नै ठीक हुन्छ कि भन्ने डाक्टरहरुमा आशा देखिन्छ ।
अर्को विकल्प भनेको मृगौला प्रत्यारोपण नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिल्यै एकपटक प्रत्यारोपण भइसकेकाले अब गर्ने पुनःप्रत्यारोपण हो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री यसअघि सिंगापुर उपचार गर्न जाँदा नै यो विकल्पबारे छलफल भएको थियो । तर, यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार पुनः प्रत्यारोपण गर्दा मिर्गौला काम नगर्नेदेखि संक्रमण हुने लगायतका धेरै जोखिम हुन्छन् ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर बालुवाटार आए पनि उनी पूर्णरुपमा स्वस्थ भइसकेका होइनन् । उनी चिकित्सकहरुको अब्जरभेसनमा नै हुनेछन् र थप परीक्षणहरुका आधारमा आगामी उपचार प्रक्रियाको निधो गर्ने चिकित्सकहरुको तयारी छ ।
Previous articleऐश्वर्या रायकी म्यानेजर अर्चनाको लेहेङ्गामा आगो , साहरुख खानले बचाए
Next articleमहराविरुद्ध साढे ३ वर्षदेखि ५ वर्षको कैद सजाय माग दावी